Akụkọ - Beijing topsky sonyere na mmemme mmeghe nke mongolia kwụụrụ onwe mpaghara ọrụ nchekwa ọnwa.
Ka ọnwa Juun dị na mkpụrụ ụbọchị iri abụọ, arụ ọrụ ‘Autonomous Region’s 2018‘ Safety Production Month ’nke emere na Ulan Qab. Ọ bụ nke iri na asaa "Nchekwa ọnwa nke ọnwa" na mba ahụ, isiokwu nke ihe omume ahụ bụ "Ndụ Mbụ, Ọganihu Nchedo"
N'ime isi ebe emume “Ọnwa Mmepụta Nchekwa” na mpaghara kwụụrụ onwe ya, ezigara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị na-ahụ maka saịtị nchekwa 300 n'ihe omume ahụ, ha wee gbaa akaebe na "ọkụ ọkụ ọkụ na ebe ndị mmadụ jikọtara", ndụmọdụ na ọkụ ihe ngosi ngwa ngwa ihe mberede. Aghọtara na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị ọrụ ọkụ ọkụ 100, ihe karịrị ọkụ ọkụ 20 na ụgbọ ala mberede dị iche iche sonyere na ihe omume a; e zigara ihe karịrị ndị nnapụta ahụike 30, ụgbọ ihe mberede 3, na mmadụ 3 nọ na nsogbu. Beijing Lingtian wetara ígwè ọrụ anwụrụ ọkụ na-emenyụ ọkụ na robot na-emenyụ ọkụ na Month Production Production Month nke Mongolia Autonomous Region.
Igwe mgbanyụ ọkụ na-agbakwunye crawler + swing arm + wheel chassis design, nke nwere ike imeghari n'ọtụtụ ala dị mgbagwoju anya na gburugburu nnapụta. Ejiri ngwaọrụ nyocha gburugburu ebe obibi iji chọpụta data gburugburu ebe obibi ka ị na-agbanyụ ọkụ ahụ. Ihe mgbanye ọkụ na-emenyụ ọkụ nwere akụkụ anọ: isi robot, igwe nyocha ọkụ, ngwaọrụ nyocha gburugburu ebe obibi, na igbe njikwa. Isi ọrụ bụ iji dochie ndị na-enwu ọkụ ka ha banye ebe ọkụ na-ere ọkụ, ihe mgbawa, nsị, ikuku oxygen, oke anwụrụ ọkụ na ihe ọghọm ọdachi ndị ọzọ dị egwu iji mejuputa ọgụ ọkụ na nnapụta dị irè, nchọpụta kemịkal na nchọpụta ọkụ.
1. ssdị chassis nke robot nchọpụta anwụrụ ọkụ bụ crawler + swing arm + wheel. Ihu na azụ ihu abụọ na-agba ọsọ na crawler nwere ike ịkwọ ụgbọala dị iche iche dị mgbagwoju anya. A na-eji mgbanaka ígwè dị n'ime ya maka taya, nke na-eme ọ bụghị naanị na-eme ka ọsọ na-aga ije, kamakwa na-eme ka roba na-agbaze na nnukwu okpomọkụ. Mgbe nke ahụ gasịrị, ị ka nwere ike ịga ije.
2. Usoro nnyefe ikuku 4G nwere ike ịnyefe vidiyo na nlekota oru gburugburu ebe obibi n'otu oge na ngalaba iwu site na nkwukọrịta netwọkụ, na-achọpụta usoro iwu ọkụ "atọ n'ime otu".
3. Data na vidiyo na-eji nnyefe ezoro ezo abụọ, ogologo nkwurịta okwu ogologo, mgbochi mgbochi siri ike, na nkwụsị akara ikuku nke mita 1000.
4. N'ịnabata nnukwu-ike batrị gbakwunyere DC sọrọ moto, modular kesaa imewe, elu maneuverability.
5. bodygbọ ala ahụ nakweere sistemụ mmiri abụọ, nke nwere ike ịnya belt abụọ 100-mita 80 iji gaa njem.
6. The Fire monitor remotely njikwa free Ibulite, kpọmkwem ugbu a, na ịgba nọgidere kemeghi.
7. Onwe-echebe ịgba ngwaọrụ ezigbo mmiri alụlụ, jụrụ ọgwụgwọ
8. Nlekota ntanetị, ịdọ aka ná ntị oge mbụ, mgbochi na ịchịkwa gas na-egbu egbu ma na-emerụ ahụ, radieshon nuklia, radieshon thermal, ọnọdụ okpomọkụ na iru mmiri na saịtị nnapụta.
9. Kwesịrị ekwesị maka mmanụ na mmanụ ala, arụ ọrụ gburugburu ebe obibi dị egwu.
Ogwe 10.4 nke ese foto infrared dị elu iji nweta ọnọdụ ọhụụ panoramic.